Weerar ka dhacay Gobolka Galgaduud & xiisad ka taagan | dayniiile.com
Home WARKII Weerar ka dhacay Gobolka Galgaduud & xiisad ka taagan
Maleeshiyaad hubeysan ayaa weerar ay qaadeen waxaa ay Nin Shacab ah ku dhaawaceen Aaga Xera-aruuris oo dhanka Bari ka xiga degaanka xananbuure oo katirsan Gobolka Galgaduud, iyaga oo goobta ka baxsaday.
Ninka oo dhaawaciisa la geeyay Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa lagu Magacaabaa Haad-kaboole, waxaana xilliga la dhaawacayay uu ku howlanaa rarida qoys degan degaanka xananbuure.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in weerarkaan dhaawaca ah uu salka kuhaayo dilal aanooyin qabiil ah oo dhowr jeer horay uga dhacay degaanka xananbuure iyo degaano kale oo katirsan Gobolka Galgaduud.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi kudarayaan in saaka xiisad dagaal oo ka dhalatay weerarka Ninka lagu dhaawacay ay ka taagan tahay degaanka xananbuure balse Odayaasha dhaqanka ay wadaan dadaalo ay ku qaboojinayaan xiisadda maadaama lagu guda jiro Bisha Barakeysan ee Ramadaan.
Previous articleTirada dadka ay saameysay Abaarta kajirta Somalia oo la shaaciyay
Next articleDad ku dhintay Shil ka dhacay degaan katirsan Puntland
As Russia pushes its election campaign, hopes for an Easter truce...
Turkiga oo War kasoo saaray booqashada Maxamed Bin Salmaan
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo kulan la yeeshay Danjiraha Boqortooyada Sacuudiga u...